Homeअन्तरवार्तानेकपाकै नेता भन्छन,- बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हाँसीमजाक हो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल प्रष्ट बोल्छन् । कुरा नचपाइकन बोल्ने उनी हक्की छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका निकट नेता पौडेलसँग लामो राजनीतिक अनुभव पनि छन् । पौडेलसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
हिजो बालुवाटारमा भएको सहमतिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट छैन । हामीले दुईवटा कुरा उठाएका थियौं । पहिलो अनावश्यक समयमा आएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ भनेका थियौं । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी सबैको कुरा सुनेर फिर्ता लिनुभयो । दोस्रो पार्टी एकतालाई अक्षुण राखेर अझ बलियो बनाउनुपर्छ भनेका थियौं । हिजोको बैठकले बरु करिब–करिव त्यतातिर अनुभूति गरेका छौं । दोस्रो स्थायी समितिको बैठक बोलाएर सबैका भावना, दृष्टिकोणहरुको सुनुवाइ हुनुपर्छ र पार्टी कमिटिबाट पारित निर्णयका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका हौं । त्यो पनि २५ गतेका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको हिजो बैठकबाट सुनियो । करिबकरिब ठिकै दिशातिर पार्टी जान खोजेको महसुस भएको छ ।
तपाईहरुका माग सम्बोधन भयो हो ?
विषय त बाँकी छन् । पार्टी एकीकरणलाई संस्थागत बनाउने, सरकारलाई पनि अलि संस्थागत रुपममा काम गर्न लगाउने । जनताका अगाडि अझ बढी के काम गर्न सकिन्छ त्यसलाई लिएर जाने । कतिपय शीर्ष नेताहरुको विचार, दृष्टिकोण, भावनाको सम्मान कसरी जाने भन्ने विषयतिर जाने हो ।
तपाईंहरु पुरै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न थाल्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गरेपछि पुग्यो तपाईंहरुको माग ?
हामीले त्यस्तो राजीनामा नै भनेर मागेका थिएनौं । अलि पार्टी चाहीं संस्थागत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका हौं । जथाभावी अनावश्यक मान्छेहरुले ल्याएका सुझाव र सल्ला मानेर प्रधानमन्त्रीले अलिकति आफूलाई फरक ढंगले उतार्नुभयो । हिजोको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मेरा केही कमीकमजोरीहरु रहे भन्ने कुराको आत्मालोचना गर्नुभएको छ । त्यो पक्ष चाहीं सकारात्मक हो । प्रधानमन्त्रीले अरुको कुरा पनि सुन्ने, आफ्ना कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने भयो भने पार्टी संस्थागत भएर अगाडि बढ्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त आत्मालोचना गर्नुभयो, तपाईंहरुले गर्नुपर्दैन ? उहाँको ध्यान त त्यतैतिर केन्द्रित छ नि ?
त्यस्तो विलकुल होइन । म ऋषिजीलाई भन्न चाहन्छु, ‘यो अध्यादेश पहिला म सरकारको पक्षमा जहिलेपनि बोलेको छु ।’ आलोचना कहिल्यैपनि गरेको छैन । कमीकमजोरी गरेकै भए पनि ढाकछोप हुने गरी बोलेको थिएँ । हामीले खाली बेमौसमा आएको अध्यादेशको मात्रै बिरोध गरेका हौं । अहिले कोरोनासँग लेड्ने बेला विश्वनै त्यतैतिर केन्द्रित भइरहेको हामीले यो अनावश्यक पार्टीभित्र किचलो गर्ने काम भयो भनेर विराध गरेका हौं । त्यसकारण निरपेक्ष सरकारको विरोधी हामी थिएनौं । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गरेका थियौं । नराम्रा कामको विरोध गरेका हौं । सरकार सञ्चालन गर्दा पनि अलि लोकतान्त्रिक ढंगले गर्नुपर्छ । सरकारले गर्न नसकेका कुराहरु पार्टीभित्रबाट देखाइदिएर यी, यी विषयमा जनताको विरोध भनेर आलोचनाको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो ।
केपी शर्मा ओलीको सरकारको संकट टर्यो होइन ?
प्रधानमन्त्री अहिले नै राजीनामा गर्नुहोस् भनेर कसैले पनि टेबु्ल संस्थागत गरेको मलाई जानकारी छैन । ४, ५ दिनसम्म हस्ताक्षर गरेरे, यो गरेरे, ऊ गरेरे भनेर तरङ्गीत पनि भइयो । त्यो कुरा पनि प्रमाणित कतै पनि छैन । सबैले प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षको लागि घोषणा गरिसको अवस्था हो । तर, पछि परिस्थिति फरक भएको र प्रधानमन्त्रीले पनि कामकारबाहीमा पार्टीको संस्थागत निर्णय नमानेको हुँदा किन त्यसो गरेको भनेर पार्टीमा सशक्त रुपमै उठेको हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नै हटाइहालौ भनेर कसैले पनि सोच्दैन, सोच्नुपनि हुँदैन । तर, पहिलाकोभन्दा सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
बामदेव गौतमलाई बनाउने कुरा पनि आएको अनि केपी ओली पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री कसरी हुनुभयो त ?
बामदेवजीलाई अहिले नै प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्ने मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने त यो चाहिँ मजाक सिबाय केही होइन । किन भने दुईतिहाई नभइकन संविधान संशोधन हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभइकन प्रधानमन्त्री हु्न मिल्दैन । राष्ट्रिसभाबाट ल्याउँदा पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ त्यहाँ दुई तिहाई चाहिन्छ । बाहिर साथीहरुले पनि म छोड्छु, ऊ छोड्छ भन्नु पनि हाँसीमजाकका कुराहरु हुन् ।
खगराज अधिकारीले म छोड्छु भन्नुभयो नि ?
यी सबै मजाकका कुरा हुन् । यदि साच्चिकै कुनै साथीहरुले छोडिहाल्नुभएछ भने पनि त्यहाँ फेरि चुनाव जित्नुपर्यो । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुप¥यो त्यसको प्रणाली अनुरुप निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । एउटै मात्रै चुनावी क्षेत्र कसैले खाली गरिदियो भने त्यहाँ उतिखेर चुनाव गराऔं भनेर हुँदैन । मतपत्रदेखि सबै तयारी गर्नुप¥यो । त्यसकारण उहाँलाई कसैले वामदेवजीलाई भोलि प्रधामन्त्री बनाउँछौं भन्यो भने र फेरि बामदेवजी पनि म हुने भएँ भनेर हिड्न थाल्नुभयो भने नेपाली राजनीतिमा एउटा हाँसीमजाक बाहेक केही हुँदैन । यदि सबैले यस्तै काम गर्ने हो भने निर्वाचन र जनमतको हुर्मत जान्छ । किन भने ठूला सिनियर नेताहरु चुनाव हार्दा पनि जसरी पनि जानुपर्छ भनेर पाँच वर्षको लागि पाएको म्यान्डेटलाई लत्याएर जान मिल्दैन । त्यसो गर्दा अन्य साना नेताहरुलाई घात हुन्छ ।
त्यसोभए उपनिर्वाचनबाट सांसद् बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा उचित होइन ?
वामदेवजी प्रतिनिधिसभा सांसद र प्रधानमन्त्री हु्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसमाको म संसा र सम्मान गर्न चाहन्छु । तर, चुनाव लडेर हारिसकेपछि त्यसको प्रक्रियाअनुसार पाँच वर्षसम्म पर्खने कि कसैलाई चाहियो भन्दैमा कसलाई कहाँबाट निकालेर खाली गर्न सकिन्छ भन्दै हिड्ने ? मैले बामदेवजीको व्यक्तिगत रुपमा विरोध र आलोचना गर्न खोजेको होइन । कुन नियम र प्रक्रियाको पालना गरेर जाने । भोलि एउटा गाउँपालिकाको मेयर म पनि हुनुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ ? त्यसो भएर त हामीले चुनाव गरेका हौं । त्यसैले पार्टीलाई संस्थागत रुपमा संरक्षण गर्न उहाँलगायत हामीसबैको दायित्व छ ।
वामदेवजी जसरी चुनाव लड्ने तयारीमा लागिरहनुभएको छ, त्यतातिर पार्टी जानु हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तै गर्दा जाने हो भने भोलि अर्को कमरेडले पनि कुरा उठाउनु होला, ‘उहाँ हुनुभयो, म चाहीं किन नहुने भनेर । अनि फेरि अर्को क्षेत्र खाली गर्न हिड्ने गर्नु ? साच्चै भन्ने हो भने वामदेवीजीले महत्वपूर्ण तरिकाले पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेर अलि विशिष्ट ढंगले चुनावी प्रक्रियाद्वारा आउँदा राम्रो हुन्छ ।
त्यसोभए अर्को निर्वाचनपछि बामदेव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ?
अब पार्टीले के निर्णय गर्छ, त्यसमा भरपर्छ । निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला अहिले नै प्रधानमन्त्री भइहाल्ने कुरा उहाँजत्तिको व्यक्तित्वलाई एउटा मजाकमा उडाउने कुरा भएको छ । यसरी कहिले यता, कहिले उता गरेर त्यो व्यक्ति हिड्दा अरुले पनि मजाककै पक्षमा लिएका छन् । यस्ता कुराहरुले उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
विष्णु पौडेलले त यही सरकार पाँच वर्ष चल्छ भन्नुभएको छ नि ?
अब धेरै पनि छैन । एक वर्षपछि स्थानीय चुनाव आइहाल्छ । झन्डैझन्डै २६, २७ महिना यो सरकारले काम गरिसकेको छ । पार्टीमा त हामी छलफल गर्छौं । अहिले भरखरै यो सरकार तुरुन्तै बदल्ने कुरा हामीले गरेका थिएनौं । पार्टीमा चाहीं यो बारेमा स्थायी समिति बैठकमा छलफल होला । सरकारले भए, गरेका कमीकमजोरीको आत्मालोचना गरिसकेपछि कोरोना रोगको माहामारी चलिराखेको बेलामा फेरबदलतिर नलाग्दा राम्रो हुन्छ ।
यसमा जित केपी शर्मा ओलीको भयो कि प्रचण्डको ?
जित त नेपाली जनताको जो पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । मैले तपाईंकै मिडियामा भनेको थिएँ, ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं’ भनेर । त्यहीं पार्टी एकताको पक्षमा भएका साथीहरुको जित भएको मैले महसुस गरेको छु ।
अहिलेको एकतामा चिनीयाँ पक्षको भूमिका कत्तिको छ ?
यो कुरा पुष्टी नभइकन म भन्दिँन । चिनियाँ पक्षको सक्रियता बढेको, राजदूत यताउता हिँडेका कुरा राजनीति गर्नेले थाहा पाउने नै कुरा हो । तर फेरि पनि नेपालको मित्रराष्ट्रहरु चिनियाँ पक्षले राजनीतिक खिचातानी हुने, अस्थिरता हुने कुरालाई जोगाउने गरी आएको हो भने ठीक छ । अस्तक्षेपको रुपमा आएको हो भने राम्रो हुँदैन ।
यसपटक पार्टी मिलाउने चीनले ठाडै हस्तक्षेप ग¥यो नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । छिमेकी राष्ट्रहरुले तपाईंहरुले यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर राम्रो ढंगले राखिएको हो भने त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
माधव नेपालले त दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै हुँदैन भन्नुभएको छ नि ?
माधव नेपालको त्यो तर्कलाई मैले सम्मान गर्छु । किन भने उहाँ भनेको हिजो निर्वाचित पनि भएको । पार्टीको महासचिव पनि भएको र प्रधामन्त्री पनि भएको एक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । उहाँले दुईजना अध्यक्ष मात्रै मिलेर हुँदैन । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नुपर्छ । पार्टीका साथीहरु सबैको भावनाअनुसार दुई अध्यक्ष चल्नुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै राम्रो हो ।
माधव नेपालले त म तेस्रो अध्यक्ष पद लिन्न भन्नुभयो नि ?
माधवजीलाई मैले पनि भेटेको थिएँ । दुई पार्टी एकता हुनेबेलामा दुई अध्यक्ष हुनु स्वाभाविक हुन्छ । फेरि तेस्रो अध्यक्ष भन्ने कुरा त्यति स्वभनीय हुँदैन । यो पदको निम्ति अध्यक्ष लिनलाई विषय उठान गरिएको होइन । पद्धति, संकार र संस्कृति बँचोस् भनेर मैले कुरा उठाएको भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको थियो । त्यसको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । -रिपोर्टर्स नेपालबाट
काठमाडौँ, १४ वैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको विषयमा मिडियामा आएको च,र्चा झु,टको खेती भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिएर बालकोट बसे हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक चर्चामा आएपछि उपाध्यक्ष गौतमले सत्य, तथ्य विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो […]
Certainly feel that which you mentioned. Your preferred justification gave the impression to be on the internet the simplest detail to be aware of. I say for you, I undoubtedly get irked though folks give thought to worries that They only don’t know about. You managed to strike the nail upon the highest and defined out the whole factor without having possessing side-outcomes , persons could haveasign. Will most likely be back to obtain more. Thanks